Mpanamboatra sy mpamatsy kitapom-batsy - China Lunch Bag Factory
Custom Design Printed Oxford Fabric Portable Reusable Insulated Lunch Lunch ho an'ny fitsangantsanganana
Ny ivelan'ny kitapo fisakafoanana dia namboarina avy amin'ny lamba oxford ho an'ny faharetana sy fanadiovana mora foana. Tanana mafy sy nylon mavesatra andraikitra mifandray amin'ny stitching matevina izay mahatonga ny kitapo maharitra matevina, mirehareha mitondra ny sakafo atoandro anao. Ny saron'ny kitapo fisakafoanana antoandro dia vita amin'ny foil PEVA izay tsy ho mora mirehitra rehefa mitazona zavatra mafana ny kitapo, mandritra izany fotoana izany dia mampiasa zipper avo lenta izahay izay hampihena ny fahafahan'ny zipper vaky. Ny kitapo fisakafoanana dia vita amin'ny fitaovana vita amin'ny insulated izay mitazona ny sakafo a ...
Kitapo mangatsiaka vita amin'ny lamba vita amin'ny Oxford vita amin'ny rivotra miaraka amin'ny tady soroka azo ovaina
Ny ivelan'ny kitapo fisakafoanana dia namboarina avy amin'ny lamba oxford ho an'ny faharetana sy fanadiovana mora foana. Ny fonosana kitapo fisakafoanana dia vita amin'ny foil PEVA izay tsy ho mora mirehitra rehefa mitazona zavatra mafana ny kitapo. Ity kitapo mangatsiaka kokoa ity dia misy fehin-tsoroka azo ovaina, miaraka amin'izay dia mampiasa zipper avo lenta izahay izay hampihena ny fahafahan'ny zipper tapaka. Ny kitapo fisakafoanana dia vita amin'ny fitaovana vita amin'ny insulated izay afaka mitazona ny sakafo sy zava-pisotro hangatsiaka na mafana mandritra ny adiny 4 mahery. Ankoatr'izay, ny rindrina anatiny dia m ...
2020 Kitapo fisakafoanana avo lenta avo lenta ho an'ny ankizy
Ny ivelan'ny kitapo fisakafoanana dia namboarina avy amin'ny lamba oxford ho an'ny faharetana sy fanadiovana mora foana. Ny fonosana kitapo fisakafoanana dia vita amin'ny foil PEVA izay tsy ho mora mirehitra rehefa mitazona zavatra mafana ny kitapo. Ity kitapo mangatsiaka kokoa ity dia misy fehin-tsoroka azo ovaina, miaraka amin'izay dia mampiasa zipper avo lenta izahay izay hampihena ny fahafahan'ny zipper tapaka. Ny kitapo fisakafoanana dia vita amin'ny fitaovana vita amin'ny insulated izay mitazona ny sakafo sy zava-pisotro hangatsiaka na mafana. Ankoatr'izay, ny rindrina anatiny dia vita amin'ny sokajy sakafo PEVA ...
Kitapo fisakafoanana antoandro misy alikaola amin'ny fahavaratra ho an'ny ankizy
Ny kitapo sakafo antoandro dia vita amin'ny polyester 600D maharitra maharitra, milomano PEVA azo antoka sakafo ary zipera matanjaka. Ny kitapo fisakafoanana dia vita amin'ny fitaovana vita amin'ny insulated izay mitazona ny sakafo sy zava-pisotro hangatsiaka na mafana. Ankoatr'izay, ny sosona anatiny dia vita amin'ny foza PEVA kilasy sakafo hahafahanao mametraka ny sakafonao ao anaty kitapo mivantana. Ny paosy fisakafoanana madinidinika sy maivana ary maivana dia afaka mitazona kaontenera milanja tsara misy efitrano malalaka ho an'ny sakafo maivana, fitaovana ary boaty misy ranom-boankazo. Anisan'ireo lafin-javatra ny paosy eo anoloana ho an'ny napkinina sy kojakoja. ...
Fomba fisakafoanana an-tsakafo ho an'ny ankizy mafana modely ho an'ny taona 2020 ho an'ny sekoly
Ny kitapo sakafo antoandro dia vita amin'ny lamba firakotra mateza tena matevina, arofanina PEVA azo antoka sakafo ary zipera matanjaka. Ny kitapo fisakafoanana dia vita amin'ny fitaovana vita amin'ny insulated izay mitazona ny sakafo sy zava-pisotro hangatsiaka na mafana. Ankoatr'izay, ny sosona anatiny dia vita amin'ny foza PEVA kilasy sakafo hahafahanao mametraka ny sakafonao ao anaty kitapo mivantana. Ny paosy fisakafoanana madinidinika sy maivana ary maivana dia afaka mitazona kaontenera milanja tsara misy efitrano malalaka ho an'ny sakafo maivana, fitaovana ary boaty misy ranom-boankazo. Ity vokatra ity dia vita pirinty miaraka amin'ny volavolanao manokana, p ...
Kitapo mangatsiaka vita amin'ny insulated no azo ampiasaina indray ho an'ny ankizy
Ny kitapo fisakafoanana dia vita amin'ny polyester 600D, sarona PEVA azo antoka sakafo ary zipera matanjaka. Ny kitapo fisakafoanana dia vita amin'ny fitaovana vita amin'ny insulated izay mitazona ny sakafo sy zava-pisotro hangatsiaka na mafana. Ankoatr'izay, ny sosona anatiny dia vita amin'ny foza PEVA kilasy sakafo hahafahanao mametraka ny sakafonao ao anaty kitapo mivantana. Mety hameno ranomandry ao anaty kitapo mangatsiatsiaka kokoa aza ianao mba hitazomana ny hatsiaka hisotroanao mandritra ny andro lalao! Ny kitapo fisakafoanana dia natao tamin'ny fanontana miloko. mety ho an'ny sokajin-taona rehetra izany. Kitapo tote fisakafoanana atoandro ity ...
Kitapo fisakafoanana an-dàlambe Leopard-pirinty miaraka amina pirinty logo
Ny kitapo sakafo antoandro dia vita amin'ny lamba firakotra lava matevina, lamba fisakafoanana alu foil azo antoka ary zipera matanjaka. Ny kitapo fisakafoanana dia vita amin'ny fitaovana vita amin'ny insulated izay mitazona ny sakafo sy zava-pisotro hangatsiaka na mafana. Ankoatr'izay, ny sosona anatiny dia vita amin'ny foil alu alu sakafo mba hahafahanao mametraka ny sakafonao ao anaty kitapo mivantana. Ity kitapo tote fisakafoanana atoandro ity dia mifono ary tonga lafatra amin'ny famoahana na na aiza na aiza no ilainao sakafo mahasalama na sakafo kely. Tanana fohy 2 no mamela anao haka haingana dia handeha, ity vokatra ity dia avai ...